Vatori veNhau Vanosangana Vachizeya nezveMutemo Unobata Mashandiro Avo, weMedia Practitioners Bill
Vamwe vevatori venhau vanga vari mumusangano
Vatori venhau vasangana nhasi muHarare vakaita chisungo chekuti munhu anofanira kudzidzira basa rekutapa nhau asati atanga kuita basa iri sezviri kuitika pari zvino, senzira yekudzivirira kushambadzwa kwenhau dzekunyepa.
Musangano wanhasi warongwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa (MISA-Zimbabwe) zvichitevera basa riri kuitwa nehurumende rekushandura mutemo weAIPPA.
Kana hurumende ikapasisa bhiri iri, inenge yapedza kusandura kana kubvisa mutemo we Access to Information and Protection of Privacy.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuMISA,-Zimbabwe VaMalvin Mukudu, vaudza Studio 7 kuti vafara chose nekuti vatapi venhau havadi kuti bhirri iri reMedia Practioners Bill ripinde munhu wese wese.
Mupepeti wenhau wekambani yeNew Zimbabwe.Com, Nkosana Dhlamini audza Studio 7 kuti mutemo uri kuuya uyu unofanira kugadzirisa nyaya yevatapi venhau nevamwe vanoshandisa madendemutande kana kuti Social Media kutaura zvavanoda.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwemashoko nenhau zvakare vachidzidzisa kuZimbabwe Open University, VaMisheck Rusere, vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti pave nemusiyano pakati pevanhu vakadzidzira basa neveruzhinji.
Hurumende iri mushishi rekushandura mutemo wezvekufambiswa kwemashoko uye yakabvisa mutemo weAIPPA ikautsiva newe Information of Freedom Act, Zimbabwe Media Commission Bill, uye Zimbabwe Practinioners, Bill ndiro bhiri richapedza kushandurwa kwe AIPPA.